Haalotni gingilchaa kanneen qindaa'an Naannessaa gingilchaa keessatti ni mul'atu.Yeruma gingilchaan qindaa'u, galfata gingilchaa duwwaa gara gadiiNaannessaa gingilchaa tti ni argita. Jecha "Or" cuqaasuun galfata kana filachuu ni dandeessa.Galfata gingilchaa duwwaa takkaa erga filattee, unkicha keessa haalota gingilchaa dabalataa galchuu ni dandeessa. Haalotni kun buuliyaanii OR tiin haalota duraan hiikamanitti hidhamu.
Tokkoo tokkoo galfata Naannessaa gingilchaa keessaa tiif baafatni halqaraa waamamuu ni danda'a. Haalota gingilchaa naannoo kana keessaa sududaan akka barruutti gulaaluu ni dandeessa. Dirrichi qabiyyee qabaachuu fi qabaachuu baachuu isaa mirkaneessuuf yoo feete,haalota gingilchaa "duwwaa" (SQL:"Duwwee Dha") yookiin "duwwaa miti" (SQL: "Duwwee Miti") filachuu ni dandeessa. Baafata halqaraa fayyadamuunis galfata haquun ni danda'ama.
Yeroo unkaa wixineessitu, amala "Yaada ka'uumsaa gingilchaa" tokkoon tokkoo sanduuqa barruu cancala Deetaa qaaqa Amaloota walgitan qabanii qindeessuu dandeessa. Barbaadduu walfaanee haalata gingilchaa keessatti, odeeffannoo mara dirreewwan kana keessatti argaman filuu dandeessa. Qabiyyeen dirree dalaga OfumaanXumuruun fayyadamtee filamuu danda'a. Yaadannoo, Haata'uu malee, Dalagni kun eddoo fi yeroo kuufannoo baay'ee guddaa barbaadu, keessattuu weyta kuusaa deetaa guddaa keessatti fayyadamtan fi should therefore be used sparingly.